Ogaden News Agency (ONA) – Dagaallo Culus oo Dhexmaray Ciidanka Oromiya (OLF) & Gumaysiga Itoobiya.
Wararka ka imanaya wadanka Oromia ee ay Itoobiya gumaysato ayaa sheegaya in uu dagaal culus Gobolka ku dhex maray ciidanka Jabhada Xoraynta Oromia (OLF) iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ee kusugan dhulka Oromia.
Sida warku uu sheegayo dagaalkan ayaa dhacay kadib markay Jabhada OLF qaaday weeraro qorshaysan oo kamid ah dagaalada joogtada ah ee ay ku xoraynayaan wadanka Oromia waxaana ciidamada gumaysiga soo gaadhay khasaare lixaad leh oo ay kunaafoobeen.
Sida xogta aan kuhellay waxaa goobta laysku fara saaray ciidamada wayaanaha kaga bakhtiyay tiro kamid ah ciidamadooda oo aan wali soo cayimin halka dhaawucuna uu gaadhay meel sare, sidoo kale ciidanka Jabhada OLF ayaa lawareegay hub iyo rasaas iyo waliba qalab isgaadhsiin ah halka ay gubeen gaadiid dagaal.
Dadka shacabka ah ee ka ag dhawaa aaga ay dagaaladu kadhaceen ayaa sheegaya in dagaaladan laga dareemay dhamaan dhulka Oromia waxayna dagaaladan ku fasireen kuwo lagu diirsaday.
Dhinaca kale ciidamada gumaysiga ayaa dhibaateeyay dad shacab ah oo Oromia ku dhaqan waxayna isku dayayaan in ay ka aaro goostaan iyagoo aar goosigooda umara wado kastoo dad shacab ah lagu dhibaatayn karo.